NUSOJ oo soo dhoweysay go’aanka Maxkamadda Sare ku ayidday Doorashada (Akhriso) | warsanradio baydhabo
Dhageyso:-Dr HAmed Ali Muse oo lo Magacaabay Gudoomiayaha...
Home WARARKA MAANTA	NUSOJ oo soo dhoweysay go’aanka Maxkamadda Sare ku ayidday Doorashada (Akhriso)
written by warsan radio 24/07/2016
Ururka Suxufiyiinta Qaranka Soomaaliyeed ee NUSOJ ayaa soo dhoweeyay go’aan ka soo baxay Maxkamada sare ee dalka, kaasoo uu ku ayidday doorashadii Hoggaanka Ururka Suxufiyiinta Qaran.
Go’aanka Maxkamadda oo uu ku saxiixnaa Guddoomiyaha Maxkamada sare ee dalka Dr. Ibraahim Iidle Saleebaan ayaa lagu sheegay in Maxkamadda ay ayidday doorashadii dhacday 17-kii bishii mat ee sanadkan, taasoo Maxkamaddu cadeysay inay ud hacday si daah-furnaan ah.
Xoghayaha Guud ee Ururka Suxufiyiinta Qaranka Soomaaliyeed ee NUSOJ Maxamed Ibraahim Macalimuu ayaa in ugu horeyn sharciyadda ururka ay ka timid suxufiyiinta Soomaaliyeed, si weynna ay u soo dhaweynayaan in maxkamadda sare ay si buuxda u ayiddo doorashadii suxufiyiinta ee Maahir Jaamac Aadan loogu doortay Guddoomiyaha Uurka, halka Xoghayaha Guudna loogu doortay Maxamed Ibraahim Macalimuu.
Xoghayaha Guud ayaa ka codasaday hey’dadaha dalka ka shaqeeya iyo kuwa caalamiga ah ee taakuleeya suxufiyiinta in u hogaansamaan go’aanka maxkamadda sare ay ku sharciyeysay Ururka NUSOJ hogaankiisa isla markaana ay wada shaqeyn buuxda la sameeyaan.
Hadaba halkan hoose ka akhriso go’aankii Maxkamadda sare ee dalka ku ayidday doorashadii Hoggaanka NUSOJ
NUSOJ oo soo dhoweysay go’aanka Maxkamadda Sare ku ayidday Doorashada (Akhriso) was last modified: July 24th, 2016 by warsan radio
DHAGEYSO: CASHARKII 25AAD EE TAFSIIRKA QUR’AANKA KARIIMKA EE SH. XASAN GAAB
Akhriso:-Mareykanka oo dhaqaale ku bixinaya abaarta ka jirta Soomaaliya